EYE PROTECTION | Kyee Shwe & Sister | KS&S Myanmar | Page 4
Eyes are the most important and easily damageable part of our body. Injuries can be prevented by wearing safety goggles.
Eye injuries can occur in many- ways. Most eye injuries results from logging and the entry of solid particles such as sand (or)cement splatter in the eyes. Tiny particles and bigger particles such as broken glasses can also cause eye injuries. Moreover chemical burning, heat, flashes, and UV rays produced from welding, and particles produced from grinding can affect the eyes.
Although: the required eye protection differs due to workplace ions, conditions, safety goggles can protect against external damage and prevent eye injuries.
မျက်လုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အရေးကြီးဆုံးနှင့် ပျက်စီးလွယ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေသော အကာအကွယ် မျက်မှန်များ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
မျက်လုံးဒဏ်ရာများသည် အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ သစ်ခုတ်ခြင်း၊ သဲများ (သို့) ဘိလပ်မြေအစက်များကဲ့သို့သော အစိုင်အခဲအမှုန်များသည် မျက်စိအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သောကြောင့် မျက်စိဒဏ်ရာ အများစု ရရှိကြပါသည်။ သေးငယ်သောအမှုန်များနှင့် ဖန်ကွဲကဲ့သို့သော ပိုမိုကြီးမားသော အမှုန်များကြောင့်လည်း မျက်စိဒဏ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဓာတုလောင်ကျွမ်းမှုများ၊ ဂဟေဆော်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အပူ၊အလင်းတန်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကျောက်စက်တိုက်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် အမှုန်အစမျာသည်လည်း မျက်စိထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။
လိုအပ်သော မျက်စိကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုမျာသည် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအရ ကွဲပြားသော်လည်း အကာအကွယ်မျက်မှန်များသည် ပြင်ပအပျက်အစီးများ၏ အန္တရာယ်မျာမှ အကာအကွယ်ပေးပြီး မျက်လုံးဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။